Wasiirka deegaanka: Ma jiro haba yaraatee wax heshiis ah oo dowlada Puntland iyo maamulka Galmudug dhexmaray - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandWasiirka deegaanka: Ma jiro haba yaraatee wax heshiis ah oo dowlada Puntland iyo maamulka Galmudug dhexmaray
Wasiirka deegaanka Puntland Cali Cabdulaahi Warsame. [Sawirka: Puntland Mirror]
Gaalkacyo-(Puntland Mirror) Dowlada Puntland ayaa ka hadashay wada-hadalo dhawaan dhexamaray masuuliyiinta Puntland iyo Galmudug.
Wasiirka deegaanka Puntland Cali Cabdulaahi Warsame oo la hadlay warbaahinta maxaliga ah ayaa sheegay in aysan jirin wax heshiis ah oo ay la galeen maamulka Galmudug.
“Ma jiro haba yaraatee wax heshiis ah oo dowlada Puntland iyo maamulka Galmudug dhexmaray oo arinta Gaalkacyo ku saabsan… arrinta Gaalkacyo wadahadalkeeda iyo wax ka qabashedeedu maahan arrin dhowr wasiir oo Galmudug kayimid ay go’aan ka gaari karayaan walib laga yaabo aan ahayn dadka deegaanka u dhashay,” ayuu yiri Cali Cabdulaahi Warsame.
“Gaalkacyo waxa ay u baahantahay nabadgalyo waarta… Gaalkacyo waxa ay u baahantahay xalkeeda ay helaan oo ay raadiyaan dadka ay dhibaato ka dhaxayso.” Ayuu ku daray wasiirka deegaanka.
Wasiirka Cali Cabdulaahi Warsame ayaa xaqiijiyay in wasiiro katirsan Galmudug ay xiriir lasoo sameeyeen, balse waxa uu sheegay in ay u sheegeen in nabada Gaalkacyo aysan ahayn mid ka go’da wasiiro balse ay tahay nabad ka go’da dadka degan deegaanka ayna u baahantahay dadka deegaanka iyo waxgaradka in ay fariistaan xalka meesha uu ku jirana ay ka soo saa-raan.
Dhanka kale, wasiirka ayaa sheegay in dhismaha siinada ay u socoto si hasami leh ayna rajaynayaan inay kusoo gaba-gabowdo asbuuc gudihiis.
Hadalka Puntland ayaa imaanaya maalin kadib, Madaxweynaha maamulka Galmudug Cabdikariim Xuseen Guuleed uu xaqiijiyay in ay wadahadal yeesheen madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali ayna wada-gaareen heshiis hordhac ah oo lagu joojinayo colaada magaalada Gaalkacyo laguna bilaabayo wada-hadalo dhexmara labada dhinac.
Ugu yaraan 15 qof ayaa ku dhimatay dagaalo asbuucyadii lasoo dhaafay dhexmaray labada dhinac.
Sida ay bayaan ku sheegtay shalay asbuucii hore haayada Qaramada Midoobay ee xiriirka arrimaha insaanimada (UNOCHA), ku dhawaad 50,000 oo qof ayaa ku barakacay colaada ka soo cusboonaatay asbuucyadii lasoo dhaafay magaalada Gaalkacyo.